बिहानै बस ले ठ८क्क’र दिँदा आफ्नो सानाे बालकलाई छोडेर बिदा भइन कमला ! – चितवन मिडिया
बिहानै बस ले ठ८क्क’र दिँदा आफ्नो सानाे बालकलाई छोडेर बिदा भइन कमला !
मान्छेको जीवन कसरी सकिन्छ त्यो कसैलाइ था नहुने रहेछ अ८लबिदा । लम्की चुहा नगरपालिका भित्र हुने दिनानु दिन हुने सवारी दु८र्घ’टना मा किन लाप८रबाही हुँदै छ यहाँ को स्थानिय निकाय यो बिसयमा किन मौन हुन्छ? आखिर कहिले सम्म यसरी कलिलै उमेरमा कति जनाले ज्या८न गुमाउनु पर्ने हो सरकार महिना मा द८र्जनौ सम्म सवारी दु८र्घट८ना हाम्रो लम्की चुहा मात्र किन?
लम्की चुहा 1 थकाली पुर A टोल मा बस्ने दाइ अभि देबकोटा र बिशनु देबकोटा को जेठी बोइनी तिम्रो आत्माले शान्ती पावो८स बै८कुन्ठमा बाँस होस । सोकाकुल परिवार जन प्रती गहिरो समबेदना प्रकट गर्दछु ।
‘यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए घरजग्गा किनबेच हुँदा हुने अनियमितता रोकिनेछ’, उनले भने। भूमि बजार कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन। ‘मन्त्रालयअन्तर्गत रहने या छुट्टै निकाय रहने वा त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नेमा अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने। भूमि बजार सञ्चालन गर्न कार्यविधि, ऐन, नियम र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा
आरजु राणाको नाममा २ अर्बको सम्पत्ति भेटियो, स्रोत नखुलेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणद्धारा छानविन